သတင်း - သင့်တော်သောငါးတိုင်ကီစစ်စစ်ကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း
ရေသန့်စက် RO Pump
DC က pump
သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငါးမွေးကန်အတွင်းရှိငါးများ၏သိပ်သည်းဆသည်အလွန်ကြီးမားပြီးငါးနှင့်အစာအဆိပ်သင့်မှုပိုမိုများပြားသည်။ ၄ င်းတို့သည်ငါးများအားအထူးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအမိုးနီးယားကိုဖြိုခွဲ။ လွှတ်ပေးသည်။ စွန့်ပစ်လေလေအမိုးနီးယားထုတ်လုပ်လေလေရေအရည်အသွေးပိုမိုမြန်လေလေဖြစ်သည်။ ထိုစစ်ထုတ်စက်သည်မစင်များ (သို့) ကျန်ရှိသောငါးများကြောင့်ဖြစ်သောရေထုညစ်ညမ်းမှုကိုသန့်ရှင်းစေပြီး၊ ဒါဟာနို့တိုက်ကျွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပျောက်ဆုံးမရနိုငျသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အထက် filter ကို
အထက် filter သည်စာသားအရငါး tank ၏ထိပ်တွင်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းမှာလည်းမှန်ကန်သည်။
အထက် filtration ၏အလုပ်လုပ်စည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်: ရေစုပ်စက် filter ကိုအကြံပေးအဖွဲ့သို့ pumped, ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသော filter ကိုပစ္စည်းများနှင့်ဝါဂွမ်း filter ကိုမှတဆင့်ငါးအကြံပေးအဖွဲ့ပြန်စီးဆင်းလိမ့်မည်ဟုဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်အောက်ခြေရှိပိုက်ပိုက်မှငါးကန်ထဲသို့ပြန်စီးသည်။
3. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ filtration အကျိုးသက်ရောက်မှုအလွန်စံပြဖြစ်ပါတယ်
အထက် filter ကိုမရှိခြင်း
အထက် filter ကိုအောက်ပါဆွေမျိုးအကြံပြုသည်
2. အဓိကခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ငါးကြီးများနှင့်အတူ Aquarium
အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများအတွက်အပေါ်ပိုင်း filter ကိုအသုံးပြုရန်အားမပေးပါ
1. Straw VAT ကို
ပြင်ပ filter သည်ဘေးထွက်သို့မဟုတ်အပေါ်ဘက်ရှိ filter unit ကိုရပ်ဆိုင်းသည်။ ရေသည် filter tank တွင်ရေစုပ်စက်ဖြင့်ရေစုပ်သည်။ filter filter များမှတစ်ဆင့် filter လုပ်ပြီးနောက် aquarium သို့စီးသည်။
1. ညံ့ဖျင်းသော filtration အကျိုးသက်ရောက်မှု
3. ကွဲပြားခြားနားသောရေအဆင့်နှင့်အတူ, တစ်ယိုအသံမကြာခဏရှိပါတယ်
ပြင်ပ filters များကိုအောက်ပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်အသုံးပြုသည်
၁။ ၄ င်းကို ၃၀ စင်တီမီတာအောက်ရှိသေးငယ်သောအပင်များနှင့်အပူပိုင်းဒေသငါးများကိုမွေးမြူရန်ငါးမွေးကန်အဖြစ်အသုံးပြုသည်
built-in filter များ၏အထူးများ
built-in filter ကို၏အားနည်းချက်များ
3. aeration ၏အသံရှိပါတယ်
4. Filter ပစ္စည်းများမကြာခဏပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အောက်ပါအခြေအနေများအတွက် built-in filter ကိုအကြံပြုသည်
2. Straw VAT
ရေမြှုပ် filter (ရေဝိညာဉျ)
Sponge filter သည်အောက်စီဂျင်စုပ်စက်နှင့်လေပိုက်အားချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည့် filter device တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်သေးငယ်သောဆလင်ဒါများအတွက်သင့်လျော်ပြီးအလယ်အလတ်ရှိဆလင်ဒါများအတွက်အရန်စစ်ထုတ်ကိရိယာများအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
နိယာမသဘောအရရေ၌ပူဖောင်းတိုးများလာသောအခါရေထုတ်ယူခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မစင်နှင့်ကျန်ရှိသောငါးစာများကိုထိရောက်စွာစုပ်ယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင် filter ဝါဂွမ်းရှိဘက်တီးရီးယားများသည်အော်ဂဲနစ်များကိုထိထိရောက်ရောက်ပြိုကွဲစေသောကြောင့်သေးငယ်သောနေရာတွင် biofiltration ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိသည်။
post အချိန်: စက်တင်ဘာ -23-2020
တယ်လီ0086 595 87298199